Imtixaanka ITIL Mock Test for Free Diyaargarowga imtixaanka ITIL
Imtixaanka ITILma ahan imtixaanno tijaabo ah oo ay weheliyaan ITIL oo qaataan ka hor inta aysan u muuqan imtixaanka ITIL si ay u qiimeeyaan heerkooda diyaargarowga. Imtixaanka ITIL waa imtixaan qaali ah midna waa inuusan isku dayin imtixaanka ITIL isagoon qaadan ITIL Baaritaanada baaritaanka. Xarunta ITIL waa nooca shahaadooyinka qasabka ah ee IT iyo xirfadlayaasha ITES. Haddii aad u socoto imtixaanka ITIL ama imtixaanka ITIL adiga oo aan diyaarin waxaa loola jeedaa inaad khatar u tahay USD 170. Rajaynayso inaadan jeclaan lahayd inaad qaaddo khatartaas.
Faa'iidooyinka imtixaanka ITIL Mock Test ama diyaarinta imtixaanka ITIL
Aqoonta leh jawiga imtixaanka
Kordhi xawaaraha & Xaqiijinta
Fahan wanaagsan oo ku saabsan su'aalaha
Imtixaanka ITIL waa imtixaan qaali ah, sidaas darteed waa inuu yaqaanaa jawiga, Imtixaanka ITIL ee imtixaanka ka ITS waa khibrad la mid ah. Su'aalaha 40 ee la isku dayayo daqiiqado 60, oo ku jira xaalad isku mid ah isla markaana dareemaya cadaadad isku mid ah ka hor imtixaanka dhabta ah. Imtixaanka tijaabada ayaa ku kalsoonaan doona, ka qaybgalena wuu ka raaxaystaa waqtiga dhabta ah Imtixaanka aasaasiga ah ee ITIL.
Su'aalaha ku jira imtixaanka ITIL way adag tahay, markaa had iyo jeer waa talooyin siinta tijaabada tijaabada ah ka hor imtixaanka dhabta ah. Adigoo isku dayaya imtixaanka ITIL, wuxuu siinayaa faham dheeraad ah ee su'aalaha, noocyada su'aasha iyo taas oo horseedi doonta kor u qaadista xawaaraha iyo saxnaanta.
Dhammaan imtixaannada ayaa leh waqti xadidan, sidaas oo kale Imtixaanka aasaasiga ah ee ITIL, 40 su'aalaha 60 iyo dhibcaha gudbidda waa 70%, markaa waa mid u baahan inuu ahaado mid degdeg ah. ITS.Taxanaha imtixaanka ITIL waxay kuugu fiicnaan doontaa maareynta waqtiga maareynta iyadoo la isku dayayo imtixaanada ITIL dhabta ah.
Imtixaanka Isudiyaarinta ITIL - 1
Imtixaanka Isudiyaarinta ITIL - 2
Imtixaanka Isudiyaarinta ITIL - 3
Imtixaanka Isudiyaarinta ITIL - 4
As Imtixaanka aasaasiga ah ee ITIL waa imtixaan qaali ah iyo weliba maalgelin mustaqbalkaaga ah, markaa waxaanu hubinaynaa in aad ka gudubto imtixaanka dhabta ah. Our Taxanaha imtixaanka ITIL waxay ku siin doonaan su'aalo noocaas oo kale ah ama u fiirso ugu dambeyn Imtixaanka aasaasiga ah ee ITIL dumidda, taas oo kaa caawineysa inaad fahamto su'aalaha si habboon oo sahlan.
Nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah Tababarka ITIL iyo imtixaanka
Ereyada loogu talagalay buugaagta:
imtixaanka aasaasiga ahsu'aalaha iyo jawaabaha 2016
imtixaanka aasaasiga ahsu'aalaha iyo jawaabaha 2017
intee in le'eg ayaad u baraneysaaimtixaanka aasaasiga ah
intee in le'eg ayey qaadanaysaa in wax laga bartoimtixaanka aasaasiga ah
Guudmarka Shahaadada ee ITIL - Asaasiga ITIL